ဖြစ်အံ့ဆဲဆဲတစ်နှစ်တာခုနှစ်တွင် Oracle က e-စီးပွားရေး Suite နှင့်ဗိုလ်မှူးအပ်ဒိတ်များ၏အနာဂတ်
E-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း suite ကို တရားဝင်အကြောင်းပြချက်များအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုပြောခြင်းငှါ။ Oracle ကဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ဒေတာဘေ့စဆော့ဖျဝဲ၏ရှေ့ဆောင်, Cloud အင်ဂျင်နီယာစနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းဆော့ဝဲ Programs ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကအနာဂတ်-အဆင်သင့်ဖြစ်စေမိမိတို့၏ Oracle က e-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Suite သနျ့အပေါ်စောင့်ရှောက်။ the Year 2015 Oracle က Microsoft ကနောက်, ဒုတိယအကြီးဆုံးဆန်းသစ် software ကို developer အသွင်ပြောင်းမျက်မြင်။ သင်ကနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့် function ကိုဘယ်လိုသိရှိခြင်းအတွက်အလွန်အကျွံစိတ်ဝင်စားပါသလား? ဒီနေရာမှာတစ်ဦးမ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာပုံပြင်တခုလုံးရဲ့:
Oracle က e-စီးပွားရေး Suite ရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲ?
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် E-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Suite အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏အခန်းက္ပ:
EBS သို့မဟုတ် Oracle က e-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Suite တစ်ခုတည်းဒေတာဘေ့စနှင့်အတူတစ်ခုတည်း server ကိုလယ်ယာလုပ်ကိုင်ရန်လုပ်ငန်းများပေးထားပါတယ်။ EBS ခြုံငုံ
SCM - Supply Chain Management ။
CRM - ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု။
EBS ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးဗားရှင်း 2007 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ. ဝေးရောက်လေပြီ။ လောလောဆယ်ဟာ Oracle ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 12.2.6 မှာဖြစ်ပြီးကြီးမားတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူ 2019 သို့မဟုတ် 2020 အတွက်လာမယ့် version ကိုစေလွှတ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
EBS ၏အဓိကဗားရှင်း 2007 အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ. ဝေးရောက်လေပြီ။ လောလောဆယ်ဟာ Oracle ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း 12.2.6 မှာဖြစ်ပြီးကြီးမားတဲ့အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူ 2019 သို့မဟုတ် 2020 အတွက်လာမယ့် version ကိုစေလွှတ်လိုသောဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ Two-Step အဆင့်မြှင့်:
ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုအနီးကပ်အဆင့်မြှင့်သက်သေခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့် လွှတ်ပေး 12.2.7 နှင့် 12.2.8 အားဖြင့် 2019 ။
2 ။ ပိုမိုလုံခြုံတိမ်တိုက်:
Oracle ကကြည်းတပ်သို့မဟုတ်သေးသည်မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကွေဖြစ်ကြောင်းအစိုးရလယ်ကွင်းမှလုံခြုံသောမိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအပေါ်ပြင်ဆင်နေသည်။ ထိုအပွင့်လင်းအသင်းအဖွဲ့များအားဖြင့်ကျင်းပသည့်အဆိုပါအထိခိုက်မခံ data ကိုယိုစိမ့်၏ခြိမ်းခြောက်မှုမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြပြီး Oracle ကဒေတာ transfer 12.3% လုံခြုံရုပ်သံလိုင်းအဘို့မွေးစားနိုင် EBS ၏ 100 လွှတ်ပေးရန်အဘို့ဆင်း buckling ဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ အနာဂတ်တိမ်တိုက်သည်:
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် 2030 အားဖြင့်ကြီးမားတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုင်တွယ်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနိုင်စွမ်းစေရန် SaaS (software ကို-as-a-service ကို) ကို အသုံးပြု. အပေါ်ကိုအာရုံဖြစ်ပါတယ်။ Oracle ကထဲကနေ Godwin အချိန်မီ EBS ပြောင်းရွှေ့ရသောလုပ်ငန်းများသည်, အသင်းအဖွဲ့သို့ထိုးသွင်းခံရသစ်ကို SaaS န်ဆောင်မှုမြင်ရပါလိမ့်မည်ကိုးကား။
စာရင်းကိုင်, စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, ကုန်ကျစရိတ်နှမြောအစီရင်ခံစာ-စောင့်ရှောက်, cloud-based သိုလှောင်မှုမကြာမီ EBS အတွက်အသုံးချနိုင်သည့်အချို့သော module တွေဖြစ်ကြသည်။ Intelligent SaaS ဟာ Oracle ၏ကိုအသုံးပြုသည်အဆိုပါသပ္ပါယ်မကြာမီပိုကောင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်အခြေစိုက်စခန်းထိ, အဖြစ်ကောင်းစွာဖြစ်ကြသည်။
4 ။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် Analytics မှ:
ပြန်ကြားရေးသိပ္ပံဤသည်နေ့ရက်ကာလပူပြင်းတဲ့-ဖမ်းအရာဖြစ်ကြ၏။ Oracle ကအဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ခန့်မှန်း Analytics မှပါဝါရန်၎င်း၏ SaaS န်ဆောင်မှုများအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်န်ဆောင်မှု computationally အလွန်ကျယ်ပြန့်စေခြင်းငှါအခိုင်အမာနေကြသည်နှင့်စက်သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
5 ။ မိုဘိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု:
အဆိုပါမိုဘိုင်းသဟဇာတ software ကိုအနီးအနာဂတျမှာ Oracle ကနှင့်၎င်း၏ပြိုင်ဖက်၏အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ EBS အားကောင်း On-ဝုဏ်များအတွက် Oracle က Regression မိုဘိုင်း Apps ကပသို့စီးဆင်းရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်ဤအရပ်သည်မိုဃ်းတိမ်သို့ပိုပြီးကြောင်းတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဇာတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး EBS ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလီဆယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Oracle ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် EBS ၏ကြီးမားသောအတိုင်းအတာသတင်းပို့နှင့်တကွ, EBS ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်ထိုနည်းတူခုန်များနှင့်ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ထင်နေသည်။ တိုင်းအသစ်ကအဆင့်မြှင့်လွှတ်ပေးရန်ဟာ Oracle Certified ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မြင့်တက်များအတွက်ဝယ်လိုအား။ သင်တစ်ဦးဟာ Oracle EBS ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရည်ရွယ်သောဖြစ်ရပ်၌, သင်တစ်ဦးဟာ Oracle အသိအမှတ်ပြုဘို့အသွားသင့်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးဟာ Oracle EBS လက်မှတ်အဖုံးငှါ?
ပို. ပို. လုပ်ငန်းတွေဟာ Oracle, E-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Suite မှရွှေ့မည်။ ဒါကွောငျ့ဒီဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းလက်မှတ်၏တန်ဖိုးနှင့်သင်တန်းအကြောင်းအရာယခုနှစ် 2019 နှင့် 2020 ပိုမိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပိုမိုမြင့်မားလစာ packages များရယူ, တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖုံးအုပ်လိမ့်မည်:
RDBMS သဘောတရားများနှင့် SQL ၏လက်တွေ့သဘောတရားများ။
လက်ကမ်း Oracle က 9i သို့မဟုတ် 10g ။
E-စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Suite အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်သင်သည်ပူးတွဲပါဆောင်ရွက်ချက်များလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်:
ထိုဒေသတွင်လိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်ကူးပြောင်းခြင်း Functions များနှင့်အခြေအနေများကိုဖော်ပြချက်ဖွံ့ဖြိုး
အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ဘို့ EBS ၏အုပ်စု Functions များအသုံးချဖို့အားဖြင့်စုစုပေါင်းဒေတာများ
လုံးဝအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်များအတွက် Oracle က Database တစ်ခုနဲ့ဗိသုကာ Exploring
အဆိုပါ Oracle က EBS Software များ Install လုပ်ခြင်း
တစ်ဦးဟာ Oracle Database ကိုပြုပြင်ကြည့်
လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်သတင်းအချက်အလက်နှုန်းအဖြစ်ဟာ Oracle Database ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Backup ကိုချိန်ညှိမှုများ Configuring နှင့် reconfiguring
Oracle ကတသမတ်တည်းသုံးမှတ်သားဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုခိုင်မာစေရန်, E-စီးပွားရေး Suite အဆင့်မြှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်ပါတယ်
Mobility ကိုနှင့် UI ကိုခေတ်မီ
Oracle ကအဆိုပါပစ်မှတ်ထားလုပ်ငန်းများနှင့်အတူကျယ်ပြန့်စျေးကွက်စစ်တမ်းအပြေးခဲ့ပြီးလုံးဝဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးလမ်းပြတည်ဆောက်နေသည်။ ဖောက်သည်ဖောက်သည်တိမ်တိုက်အခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ Applications ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားကြကုန်အံ့, ထိုသူတို့ EBS ရင်းနှီးမြှုပ်နှံများ၏အားသာချက်များကိုအဘယ်အကျိုးကိုရစေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများတသမတ်တည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ မကြာသေးမီကအဆင့်မြှင့် function သို့သော်သူတို့ EBS ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေစိုက် SaaS ထည့်သွင်းရန်ညွှန်ကြားနေကြတယ်, EBS အတွက်အများကြီးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်က ITIL သင်တန်းအကြောင်းကိုသိရှိရမည်ကြောင်း 8 အရေးကြီးအရာ